DAAHA GADAASHIISA: MW dooran oo durba madaxa la galay mashaqo uu horay usoo maray MW degaya | Hadalsame Media
Home Maqaallada DAAHA GADAASHIISA: MW dooran oo durba madaxa la galay mashaqo uu horay...
DAAHA GADAASHIISA: MW dooran oo durba madaxa la galay mashaqo uu horay usoo maray MW degaya
(Hadalsame) 18 Maajo 2022 – Imtixaanka kowaad ee MD dooran HSM
Wixii ka dambeeyey doorashadii 2017 ee uu Villa Somalia ku yimi MD-naha xilka ka dagaya Mohamed Abdullahi Farmaajo, dalka waxaa isku hayey siyaasado kala ujeed ah balse qaar danahu daraf isugu geeyey.
Kooxdii xilligaa talada laga tuuray ee Dhamjadiid, sideed bilood kaddib ayey bilaabeen dib isu abaabul iyo buuxinta kaalintii mucaaradnimo, balse kaligood ma wajihi karin dhinicii bedelay ee isugu wanqalay Nabad iyo Nolol, sidaas daraadeed, waxaa lagama maarmaan ahaa in ay helaan taageero iyo xoojin.
Taasi waqti ma qaadan, 23-kii Febraayo, 2017, kaddib magacaabiddii RW Hassan Ali Khaire, waxaa kooxdii talada timi ku qarxay Volcano, waxaa nidaamka dibada ka istaagay kaadiriintii xisbigii Daljir oo kaalin weyn ku lahaa doorashadii Farmaajo.
Waxaa taxaaluf sameeyey oo bannaaka isku wareystay Dhamjadiid iyo Daljir oo ku heshiiyey in dagaalkii hore la’iska ilaawo, la’isuna kaashado gulufka siyaasadeed ee ka dhanka ah Villa Somalia.
Bishii Sebteembar 30-keedii 2018 waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay xisbiga Midowga iyo Dimuqraadiyadda (UPD) oo mideeyey PDP oo ay ka tirsanaayeen kooxdii Damjadiid iyo Daljir, waxaa jiray kooxo kale oo yar yar oo iyana galay xisbiga cusub.
Halgankii ay soo wada galeen maalintaas kooxahan isa suran waxa ay horseed u noqotay in 15-kii Maajo dib loo doorto Xassan Shiekh Maxamuud, waxaa xiiso leh, isla raggii 2017 xilka ka tuuray in ay shaqada ugu culus ee guushiisii Isniintii hore ay lahaayeen.
Hadaba, waxaa la’is weydiinayaa Xukuumadda la filayo in uu HSM dhiso, gaar ahaan Wasiirka Kowaad sidey ku imaan doontaa?
Daljir iyo Farmaajo waxa ay ku kala tageen jagada RW oo ay rabeen balse uusan siin.
Sida ay sheegayaan xogo hoose, waxaa hadda socda guux ku saabsan cidda heleysa xilkaas iyo halka uu ka imaanayo.
Daljir, oo lahayd awoodda ugu badan ee ol’olihii HSM, waxaa kaadiriintooda duli hogana weydiimo badan, sida:
1 – Ma waxa ay toos ugu milmeen Damjadiid?
2 – Mise waa xisbi ku jiray dallad oo lahaa yool fog oo hoggaaminta dalka ah?
Haddii ay HAA tahay wediinta hore, MD dooran Hassan Shiekh Mohamud wey fududaan doontaa in uu ka gubo imtixaanka adag ee dhisidda Xukuumadda balse, haddii tan dame jirto, waxa uu furi doonaa xaalad dhibaato kale horseedda oo xalkeeda looga baahan yahay waxa afka qalaad loogu yeero ‘Pandora’s Box!’
Qormadani waa horudhaca ciyaaraha siyaasadeed iyo mawjadaha dhowaanahan nagu soo fool leh, su’aalaha ku lifaaqanna waqtiga ayaa mid waliba ka jawaabi doona.
W; Q: Maxamed Kaafi
Previous article”Waa qayb ka mid is ballaarinta NATO ee Afrika!” – Fal-celinta shacabka Kenya ee soo dhowaynta Xasan Sh ee soo noqoshada Maraykanka
Next articleDEG DEG: Turkiga oo xitaa diidey in la furo araajida Sweden & Finland ee ku biirista NATO